Xildhibaano sheegay in guddiga doorashada uu u adeego shaqsiyaad | raascasayrmedia.com
← Madaxwayne Dooxajoog Iyo Wafti uu hogaminaayo oo lagu soo dhoweeyay Dagmada Bareeda (Sawiro)
Markab Xamuul oo ay la socdaan 24 Shiineys ah oo la afduubay →
May 5, 2011 · 4:46 pm
Xildhibaano sheegay in guddiga doorashada uu u adeego shaqsiyaad
Xildhibaano ka tirsan barlamanka KMG Soomaaliya ayaa ku eedeeyay guddiga doorashooyika barlamanka inay u shaqeeyaan shaqsiyaad gaar ah.
Xildhibaan C/qaadir Cismaan Cali (Shiddo) oo ka mid ah Mudanayaasha barlamanka Soomaaliya oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu eedeeyay guddiga doorashooyinka barlamanaka kuwaasi oo uu tilmaamay inay wadaan dano gaar ah.
Xildhibaan Shiddo ayaa waxaa uu sheegay in guddiga doorashooyinka barlamanka ay ku tumanayaan sharciga barlamanka islamarkaana ay wadaan qorshayaal ay ugu adeegayaan dano gaar ah sida uu hadalka u dhigay.
C/qaadir Cismaan Cali (Shiddo) ayaa waxaa uu shaaca ka qaaday in Xildhibaano gaaraya 421-Mudane ay ansixiyeen in doorashada Madaxtinimo lasoo horumariyo gudoomiyaha barlamanka hase ahaatee waxaa uu sharci daro ku tilmaamay in guddiga doorashooyinka ay sheegaan inay soo horumarinayaan doorashada Madaxweynaha taasi oo uu tilmaamay in aan waxba ka’ogayn Mudanayaasha barlamanka Somaaliya.
Hadalkaani ayaa kusoo beegmaya xili shalay guddiga doorashooyinka barlamanka KMG Soomaaliya uu shaaca ka qaaday in uu diyaariyay kararkii looga qayb gali lahaa Doorashada Madaxtinimo ee dalka Soomaaliya.